लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न एभरेष्ट बैंकले बोलायो साधारणसभा
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले १ पुषमा २७औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ ।
बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न आफ्नो केन्द्रिय कार्यालय, लाजिम्पाटमा बिहान १० बजे साधारण सभा आह्वान गरेको हो ।
सभा भर्चुअल माध्यम अर्थात् जुममार्फत आयोजना हुनेछ । सहभागी हुने सेयरधनीलाई मिटिङ आईडी र पासवर्डको व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । सभामा हाल कायम चुक्ता पुँजीको ६ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र सोमा लाग्ने करसहित गरी चार दशमलव ३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित हुनेछ । बैंकको प्रवन्धपत्र संशोधन गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेलगायतका एजेण्डा छन् ।
बैंकले सभा प्रयोजनका लागि १७ मंसिरमा बुकक्लोज गर्ने भएको छ। यसर्थ, १६ मंसिरसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका सेयरधनीले सभामा भाग लिन तथा बैंकले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
एभरेष्ट बैंक डिबेन्चर २०८६ को निष्काशन तथा विक्री माघ ३ बाट खुल्ला
काठमाडौँ । एभरेष्ट बैंक डिबेन्चर २०८६ को निष्काशन तथा विक्री माघ ३ बाट खुल्ला हुने भएको छ । आठ बर्ष अवधि तथा बार्षिक ८.५ प्रतिशत ब्याजदर भएको प्रति ऋणपत्र रु. १००० (एक
एभरेष्ट बैंकद्वारा भक्तपुर सिसिटिभि जडान समितिलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौँ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले भक्तपुरको सिसिटिभि. जडान समितिलाई एक लाख सहयोग गरेको छ । भित्री सडकखण्डमा सिसिटिभि जडान कार्यमा सहयोगका लागि एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको तर्फबाट एक लाखको चेक बैंकका संचालक
एभरेष्ट बैंकको मोबाइल एप ओम्नी च्यानल प्रणालीमा अपग्रेड
काठमाडौँ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले इबिएल-टच २४ (मोबाइल एप) लाई ओम्नी च्यानल प्रणालीमा अपग्रेड गरेको छ । बुधबार, एभरेष्ट बैंक आफ्नो मोबाइल बैंकिङ संस्करणलाई नयाँ 'ओम्नी च्यानल' मा अपग्रेड गरेको छ
एभरेष्ट बैंकको साधारण सभा सम्पन्न, लाभांशसम्बन्धि प्रस्ताव पारित
काठमाडौँ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको २७औं बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न साधारण सभाले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित आर्थिक बर्ष २०७७ र ०७८ को आर्थिक विवरण, वासलात, नाफा नोक्सान
सिके राउतका कार्यकर्ताद्वारा जनकपुरमा चिकित्सकमाथि आक्रमण
काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए २९ सय संक्रमित, सक्रिय संक्रमित कति छन् ?
राष्ट्रियसभा निर्वाचन: प्रदेश १ मा महिलातर्फ नेकपा एसकी जयन्ती राई विजयी
राष्ट्रियसभामा सुदूरपश्चिमबाट महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी शाह विजयी